ဂျူနီယာဝင်း – အမှတ်တရ နေ့လေးတစ်နေ့ | MoeMaKa Burmese News & Media
Law Eh Soe - ရိုက်ခတ်နေဆဲ ရွှေဝါရောင်လှိုင်းလုံးများ
အောင်ဝေး - ကိုရွှေအောင်ဝေးတို့မ န္တလေးမှာနှဲ မှုတ် ခဲ့ ကြ စ ဉ် က
ဖိတ်စာရချိန်မှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာလေးတွေ တွေးမိသည်။ ကျွန်မချစ်ခင်လေးစားသော စာရေးဆရာတချိူ့ သည်ပွဲကလေးကုို မတက်ရောက်နုိုင်တော့တာကုို တွေးမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘဘဦးဝင်းတင်၊ ဆရာဦးဝံသ၊ ဆရာဒဂုန်တာရာ၊ ဆရာပါရဂူ၊ ဆရာမင်းလူ၊ ဆရာသုမောင်၊ ဆရာမောင်ဝဏ္ဏ တုို့စသည်ဖြင့် ကွယ်လွန်သွားသူများကုို သတိရမိတာဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကျွန်မတုို့မိသားစု မတွေ့ကြတာ ဘယ်လောက်တောင်ကြာ ခဲ့ပြီလဲ။ ဒါကုိုတွေးမိယုံနှင့်ပင် ကျွန်မတုို့ မိသားစု သွားဖုို့ဆုံးဖြတ်မိကြပါသည်။ ကျွန်မက စာရေးဆရာဖြစ်နေလုို့ သည်ပွဲကုို လုိုက်ပါခွင့်ရတာမို့ …. ငါ့နှယ် .. တော်ပါသေးရဲ့… စာရေးဆရာဖြစ်မိပေလုို့ ဟုကြိတ်ပြီး စိတ်လှူပ်ရှားမိရပါသည်။
တခြားသူတွေတော့မသိပေမယ့် ကျွန်မတုို့အတွက်တော့ ဒီလုိုသွားခွင့် တွေ့ခွင့်ရခြင်းဟာ အလွန်ကြီးကျယ်သော အဖြစ်ပါပဲ။ ဒါဟာလည်း ကျွန်မတုို့အားလုံးက စာရေးဆရာများ ဖြစ်နေလုို့။ ကျွန်မတုို့အားလုံး အတွက်တော့ သိပ်ကုို ထူးခြားတဲ့ ခက်ခဲတဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မတို့၏ ဦးလေးများ၊ အဒေါ်များကလည်း သွားဖုို့ အားပေးကြပါသည်။ မတွေ့တာကြာတဲ့ သူဖြစ်နေလုို့ ဘာစကားဘယ်လုို ဆုိုရပါ့။ ကျွန်မ၏ ဆရာဝန်ဦးလေးကတော့ အန်တီစုနဲ့တွေ့ရင် ပြောဖုို့ စကားတစ်ခွန်းသင်ပေးလုိုက်ပါသည်။
‘I Miss You.’တဲ့။
ထုိုတွေ့ဆုံပွဲမှာ စာရေးဆရာများ၊ ကာတွန်း ပန်းချီ၊ ကဗျာဆရာ၊ ထုတ်ဝေသူတချိူ့ ကုို တွေ့မြင်ခွင့်ရပါသည်။ တစ်ယောက်ချင်းဆီမိတ်ဆက် …. ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုိုယ် နံမယ်ထပြောရ..တာက နည်းနည်းတော့ ဆန်းပြားသလုိုဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်သိသော စာရေးဆရာများ ဘယ်သူလာတယ် မလာဘူး ဆုိုတာကုို သိခွင့်ရလုိုက်တာမုို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော မိတ်ဆက်ပွဲဟု မြင်မိပါသည်။
ပွဲပြီးသွားတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ကျွန်မဖေဖေ၊ မေမေ တုို့က နှူတ်ဆက်ဖုို့သွားကြတော့ ကျွန်မလည်း နောက်ကလုိုက်သွားပါသည်။ ကျွန်မတုို့လက်ထဲတွင်မေမေကြီး ဒေါ်ခင်မျူိးချစ်ရေးသားသော Buddhist Way of Life in Myanmar စာအုပ် တစ်အုပ် နှင့် ကျွန်မ၏ Days and Flowers of Myanmar စာအုပ်နှင့် My Life Will Go On စာအုပ်ပါးလေး နှစ်အုပ်ကုို ယူလာပါသည်။ အန်တီစုက ကျွန်မတုို့ အားလုံးကုို မှတ်မိသဖြင့် ၀မ်းသာမိပါသည်။ စာအုပ်လေးများကုို အန်တီစုက သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားပြီး ဖေဖေသိချင်နေသော Oxford University နှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းကုို ဖြေနေကြတာကုို ကျွန်မက ဓါတ်ပုံရုိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ပြီးတော့ တော်ဝင်နှင်းဆီက ကျွေးသော ထောပတ်ထမင်းကြက်သားဟင်းနှင့် အချိူပွဲများကို စားသောက်ကြပါသည်။ ကျွန်မက ရင်းနှီးနေသော စာရေးဆရာများစွာကုို လုိုက်နှုတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မမေမေက အန်တီစု ပြောကြားစဉ်က အင်္ဂလိပ်လုို စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကုို သေချာသိချင်သဖြင့် သွားမေးမည်ဟုပြောကာ ကျွန်မဆီက စာရွက်အပုိုင်းတစ်ခုကုိုိတောင်းပြီး ထွက်သွားသည်။ ကျွန်မဖေဖေကုိုလည်း တချိူ့က အထင်တကြီးနှင့် ထုိုအင်္ဂလိပ်စာကြောင်းကုို လာမေးနေကြတာကြားမိသည်။ ကျွန်မဖေဖေကတော့ သူလည်းမြန်လွန်းလုို့ သေချာမကြားလုိုက်ရကြောင်း ပြန်ဖြေနေရပါသည်။
နောက်တော့ ဓါတ်ပုံစုရုိုက်ရမည်ဟု ဆုိုသဖြင့် အားလုံး ပါဝင်ကာ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြ ပါသည်။ အဲသည်ဓါတ်ပုံတော့ မရလုိုက်ပါ။ နောက်တော့ ပေးမည်ဟုတော့ ပြောပါသည်။ ကျွန်မဦးလေးသင်ပေးလုိုက်သော စကားတစ်ခွန်းကုို ကိုယ်တုိုင်တော့ မပြောလုိုက်ရပေမယ့် ကျွန်မမေမေက ပြောလုိုက်သည်ဟု ဆုိုပါသည်။ ကျွန်မဖေဖေလဲ သူသိချင်သော Oxford နှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းကုို မေးခွင့်ရလုိုက်လုို့ လာရကျူိးနပ်သွားပါသည်။ အိမ်ရောက်မှပဲ ကျွန်မမေမေကုို သူသွားမေးတာ ရခဲ့လား ဆုိုတာ မေးရဦးမည်။
ကျွန်မတုို့မိသားစု အတွက် အန်တီစုကုို တွေ့ချင်တဲ့ ဆနလေးတစ်ခု ပြည့်သွားတဲ့နေ့တစ်နေ့အဖြစ် အမှတ်ရနေမည် ဖြစ်ပါသည်။
(Photo – Suu with Burmese Writers, 25th August 2014, NLD Information)